ऋषि कपुरको पोष्टर टाँसिएको चोकमा समेत हेर्नेको भीड हुन्थ्यो
जब ऋषि कपुर ‘बबी’ मार्फत् ठूलो पर्दामा आए, हिन्दी सिनेमा उद्योगमा रोमान्सको परिभाषा र छवी बद्लियो । उनी तुरुन्तै ‘पोष्टर ब्वाई’ भए । उनको सिनेमा लागेका हलमा भीड हुनु स्वाभाविक थियो । तर शहरका चोकमा टाँसिएको उनको पोष्टर हेरेर मात्र पनि मान्छेहरु टोलाइरहेका हुन्थे । उनलाई पोष्टरमा एक झल्को हेरर कैयौं मानिसले आफ्नो मनको धित मार्थे ।
उनी आफ्ना प्रसिद्ध पिता राज कपुरको विरासत बोकेर आएका थिए । तर उनीसँग आफ्नो बेग्लै र मौलिक प्रतिभा थियो । जब म ७ बर्षको थिएँ, मेरा मातापिताले उनलाई ‘दुनियाँ मेरी जेब मे है’ को प्रिभ्यु हेर्न निम्त्याएका थिए । यो सुनेर मेरो खुशीको सीमा रहेन । तर आमाले मलाई लिएर जान अस्वीकार गर्नु भयो ।
त्यो समय मेरो स्कुल लागिरहेको थियो । स्कुल सकिनेबित्तिकै मैले रातीको सो हेर्न जानुपर्ने हुन्थ्यो । त्यही भएर आमाले मलाई नलाने मन बनाउनु भएको थियो । तर म रीसले आगो भएँ । बुबाआमालाई दंग्याउन थालें । अन्त्यमा मलाई लिएर जान उहाँहरु राजी हुनु भो । ऋषि मेरा लागि ठूला स्टार थिए । मन्त्रमुग्धझैं म उनलाई हेर्थें ।
उनी मेरो लागि साँच्चैको हिरो थिए । साह्रै आकर्षक र सुन्दर । उनी मेरा लागि सदावहार रोमान्टिक हिरो रहे । मेरो बाल्यकाल उनको सिनेमाका गीत सुन्दै, उनको अभिनयको अनुकरण गर्दै बित्यो । म उनको जस्तै बुट्टेदार स्वीटर लगाउँथें र आफ्नै ओछ्यानमा नाच्थें । डिनरको प्लेटलाई ‘सरगम’को डफलीवालेको तरिकाले स्कुले साथीहरुको अगाडि बजाउँथें ।
मैले उनलाई पहिलोपटक मेरो बुबाको फिल्म ‘दुनियाँ मेरी जेब मे है’ हो सेटमा कोचिनमा भेटेको थिएँ । जब देखें हेरेको हेर्‍यै भएँ । मलाई लाग्यो कि ऊ कुनै मान्छे हैन, त्यस्तो स्मारक हो जसलाई म मेरो हृदयमा जीवनभरि उभ्याउन चाहन्छु ।
समय क्रुर मात्र छैन, दयालु पनि छ । मानिसका कैयौं इच्छाहरु पूरा हुँदैनन् भन्ठानेर हामी निराश हुन्छौं । तर मेरो जीवनमा त्यो क्षण आयो कि मैले विद्यार्थी उमेरमै ऋषिलाई निर्देशन गरें । जब मैले उनलाई ‘सोती’ मा निर्देशन गरें, उसको पहिलो शटपछि एकछिन रोकिएँ र रोएँ । मेरा आँखाहरु चिसा भएका थिए । मन भावविभोर भएको थियो । मेरो बचपनको सबैभन्दा ठूलो सपना त्यो दिन पूरा भएको थियो ।
ऋषि मेरा लागि सबैभन्दा प्रिय अभिनेता थियो । सिने क्षेत्रमा मेरो त्यस्तो आदर्श त्यस्तो तारा थियो जो आकाशमा थियो, धर्तीबाट म उसलाई हेर्दै मग्न हुन्थें । लाग्थ्यो– कुनै दिन उसलाई छुन म पनि आकासमा पुग्नेछु ।
आज मलाई असीमित शून्यताको बोध भइरहेको छ । मलाई लाग्दैछ कि मेरो अस्तित्व नै खण्डित भएको छ । म कुनै संकटमा छु । भारतीय सिनेमामा रोमान्टिक धारको ऊ एक्लो धरोधर जस्तो थियो । म उसलाई प्रेम र सम्मान दुबै गर्थें । उसका यावत इच्छा र चरित्रहरु मलाई थाहा थियो ।
उसको खानपान, उसको प्रिय पेय, उसको बोल्ने शैली सबै कुराको जानकार थिएँ । उसको अनुहार हेरेर ऊ रिसाएको, खुसाएको वा अन्यमनस्क भएको छुट्याउन सक्थें । ऊ मर्‍यो भन्ने म कसरी पत्याउँ ? म पत्याउनै सक्दिनँ । ऊ मर्नै सक्दैन । ऊ तारा हो । आकाशमा उदाउँछ । दिउँसो हामी उसलाई नदेखौंला, तर जब साँझ पर्छ, त्यो फेरि त्यही हुनेछ ।
ऋषि भारतीय रोमान्टिक सिनेमाको इतिहासमा हुनेछ, उसका सिनेमाहरुमा हुनेछ । थाहा छैन, उसका सिनेमा कति पुस्तासम्म मान्छेले हेर्नेछन् । उसलाई जसजसले पर्दामा हेर्ने छन् – यो मरिसकेको मान्छे हो भन्ने बोध कसैलाई हुने छैन । उसको कला, अभिनय र हाउभाउले ऊ उत्तिकै जीवन्त भएर मानिसको मष्तिष्कमा बस्नेछ । अर्थात् ऊ बारम्बार उदाउनेछ, पुनर्जिवित हुनेछ । आकाशको त्यो ताराजस्तै ।
मेरो प्रिय ऋषि, म तिमीलाई धेरै धेरै माया गर्छु । तिमी यो ब्रह्माण्डको जुनसुकै कुनामा जे सुकै भएर बस तर मेरो मायालाई कहिल्यै नर्बिसनु । तिम्रो कवाहती विरासत यो धर्तीमा कहिल्यै मर्ने छैन ।
(करण जोहर यस जोहरका छोरा तथा प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक हुन् । यो अभिव्यक्ति उनले ऋषि कपुरको निधनमा फिल्मफेयरलाई दिएको शोक प्रतिक्रियाबाट अनुवाद गरिएको हो ।)
लकडाउन त खुल्यो तर न संक्रमण रोकियो न अर्थतन्त्र बौरियो
भारतको नयाँ शिक्षा नीतिमा के छ ?
ओली-दाहाललाई यी कुराको हेक्का छ ?
जब नेकपाको माइन्युट बालुवाटारमै हरायो …
यस्तो छ नेपालको विश्‍वकपमा पुग्‍ने बाटो
कांग्रेसमा ९ जना सभापतिको उम्मेद्वार बन्ने मनस्थितिमा
सुनिल थापाको बर्हिगमनः राप्रपा अझै खिइने संकेत
नेकपा विवादमा माधव–केपीबीचको प्रेमघृणाको नालीबेली
गण्डकी प्रदेश, फिचर पोस्ट, मुख्य समाचार
पोखराका ती संक्रमित जो स्वाब रिपोर्ट नआउँदै व्यापार गर्न हिँडे
अगष्ट ५ मा राम मन्दिर शिलान्यास गर्दै मोदी, कहिले उत्खनन् होला ओलीको अयोध्यापुरी ?
‘डा. ओली’को पार्टीमा ‘झाँक्री’हरु सामाजिक सञ्जालमा, जनवाद कोमामा
धरमरमा संघीय सरकार, ओझेलमा प्रदेश सरकार
ती वीपी र पुष्पलाल, यी उत्तराधिकारीहरू
धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकामा पहिरो (फोटो फिचर)